“Go f**** your grandmother” Erling Haaland Oo Cay Iyo Bahdli Iskugu Daray Daray Jean – Heemaal News Network
“Go f**** your grandmother” Erling Haaland Oo Cay Iyo Bahdli Iskugu Daray Daray Jean
Karamadaha ku xidhan garoonka Signal Iduna Park ee ay ka dhacday ciyaartii maanta ay Borussia Dortmund 4-0 ku xasuuqday Schalke 04 ee horyaalka waddanka Germany ee Bundesliga ayaa waxay qabteen dhacdo fool xun oo uu sameeyey da’yarka Erling Haaland oo aflagaadooyin iyo cunsuriyad kula kacaya difaaca madow ee Jean-Clair Todibo.
Todibo oo xili ciyaareedkan u safanaya Schalke oo amaah kaga qaadatay Borussia Dortmund ayaa dhibbane u noqday aflagaado xun oo uga timid Erling Haaland, kaas oo kaliya aan aflagaadaynin isaga ee xattaa waalidiintii gaadhay.
Difaaca reer France ayaa u dhowaaday Haaland xilli lasoo laagayay koorne, si uu uga qabto in gool uu ka dhaliyo, laakiin da’yarka reer Norway ayaa cay ku miisay laacibkan, taas oo keentay in ciyaartoyda kooxda Schalke ay kusoo xoomaan Haaland oo isaguna isku difaacay qosol iyo in Todibo uu been ka sheegayo.
Warbaahinta Faransiiska ah ee Get French Football News ayaa shaacisay ereyadii aflagaadada ahaa ee uu Haaland ku yidhi Todobo, kuwaas oo ahaa “Orod W*** eyeydaa”.
Erling Haaland ayaa ciyaarta sii watay, goolna dhaliyey daqiiqaddii 28aad, hase yeeshee Todibo ayaa kulanka looga saaray dhaawac, taas oo fududaysay xamaasaddii labada laacib.
Ciyaarta labada kooxood oo ahayd mid si gaar ah isha loogu hayey ayay Borussia Dortmund bandhig cajiib ah samaysay, waxaanay guusha ku qaadatay 4-0.
Horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga oo dib loo bilaabay maanta ayaa waxa laga diiwaangeliyey dhacdooyin dhawr ah oo aan fiicnayn, waxaana ka mid ah ficilka Haaland iyo dhunkasho lama filaan ah oo uu sameeyey Deryck Boyata, taas oo uu kula kacay Grujic oo ay u wada ciyaaraan Hertha Berlin iyadoo laga doonayay inay kala fogaan.